Warshada Inverter-ka Cadceedda, Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Soolarka Inverter Warshada
QIIMAHA IIBKA LAGU LABAYN KARO SI...
STRE SOLAR tayo sare leh oo tayo sare leh
30M BRUSHLES DC Bamka cadceedda...
MG 0.75-3KW hal waji
INVT iMars MG taxanayaasha rogayaasha qoraxda ayaa loo sameeyay guryaha.Xajmi yar, miisaan fudud, fududahay in la rakibo oo la ilaaliyo, oo aad u kharash badan.
BG 40-70KW SADDEX weji
INVT iMars BG40-70kW on-grid solar inverter waxa ay u nashqadaynaysaa isticmaalayaasha ganacsiga iyo saldhigyada tamarta dhulka ee la qaybiyey.Waxay isku daraysaa T saddex-heer sare ee topology iyo SVPWM (habaynta ballaca garaaca wadnaha ee bannaan).Waxay leedahay cufnaanta awoodda sare, naqshad qaabaysan, rakibid fudud iyo dayactir, iyo waxqabad qiimo sare leh.
Taxanaha iMars BN-hal-waji-hal-waji ah oo sawir-qaade ah oo ka baxsan is-bedbedelka saafiga ah wuxuu qaataa shaqada sahayda korontada ee caadiga ah ee khadka-ka-baxsan oo ay weheliso kontoroolka koronto-dhaliyaha qoraxda, kaas oo bixiya xalal dabacsan oo badbaado leh oo nidaam ammaan ah sahayda aan kala go'a lahayn ee qoyska iyo warshadaha.
BD-MR 3-6KW HYBRID INVERTER
INVT iMars BD taxane ah inverter waa jiil cusub oo wax soo saarka kaydinta photovoltaicenergy ku salaysan fikradda ah indheergarad iyo dayactirka lacag la'aan ah, kaas oo dhexgala hawlo badan sida ku dallaca, kaydinta tamarta, photovoltaic, nidaamka maamulka batteriga BMS iyo wixii la mid ah.Waxay si otomaatig ah u aqoonsan kartaa qaabka isku xirka khadka ka baxsan waxayna ku xiri kartaa shabagga smart si loo gaaro baahida ugu sarreysa iyo baahida dooxada.
Nambarka Model: SPH 4000-10000TL3 BL-UP
Voltage Input: 160VDC ~ 1000VDC
Korantada wax soo saarka:230/400VAC
Wax soo saarka hadda: Max 6.1A ~ 15.2A
Soo noqnoqda soosaarka: 50Hz, 60Hz/± 5Hz
Nooca wax soo saarka: TRIPLE, Saddex waji
Nambarka Model:Growatt SPH6000
Voltage Input: 120V-550V
Korantada wax soo saarka:230V
Wax soo saarka hadda:27A
Inta jeer ee soo-saarka: 50Hz/60Hz
Nooca wax soo saarka: TRIPLE
Miisaanka: 27 KG
Meesha Asal ahaan: Shenzhen, Shiinaha
Nambarka Model:MIN 2500-6000TL-X rogaha qoraxda
Voltage Input: 360VAC
Korantada wax soo saarka: 230VDC
Wax soo saarka hadda:13.6A
Inta jeer ee wax soo saarka: 50/60 Hz
Nooca wax soo saarka: TRIPLE, Multiple
Nooca: beddelayaasha DC/DC, beddelayaasha DC/AC
Nambarka Model:MIC 750-3300TL-X
Voltage Input: 50-550v
Voltage soo saarka: 230v
Wax soo saarka hadda:3.6A
Nooca wax soo saarka: Single
Nambarka Model:GROWATT 6000TL3-S
Voltage Input: 620V
Korantada wax soo saarka:230/400V
Wax soo saarka hadda: 5.1-10.2A
SPF 3500-5000 ES
Nambarka Model: SPF 5000 ES
Voltage Input: 120VDC ~ 430VDC
Korantada wax soo saarka:230 VAC
Wax soo saarka hadda:80A
SPF 4000-12000T HVM TAXANAHA
Nambarka Model: SPF 6000T DVM
Soosaarka Voltage: 104-110-115-120/208-220-230-240VAC(ikhtiyaar)
Soo saarida hadda:80A ~ 120A
Inta jeer ee wax soo saarka: 50/60Hz
Nooca wax soo saarka: DUAL
Nambarka Model: SPI 3000-22000
Voltage Input: 900V
Soosaarka Voltage: 500V-680V
Soo saarida hadda:8A-45A
Inta jeer ee wax soo saarka:0-50/60Hz
Nooca wax soo saarka: Single, DUAL